सभापति देउवा सिंगो पार्टीको नेता बन्न चाहनुभएन : डा. चन्द्र भण्डारी « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं । प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगो पार्टीको नेता बन्न नचाहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सभापति देउवा सानो गुटमा बसेको आरोप लगाए ।
बुधबार काठमाडौंमा देउवा सरकारले सय दिन पूरा गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमा आफ्नै पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवालाई सानो गुटमा रमेको र सिंगो पार्टीको नेता बन्न नचाहेको उनले आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘उहाँ सानो गुटमा बस्नुभयो, उहाँको सानो ईन्जिन छ, यसले सही ड्राईभ गर्न सक्दैन् । यो समस्या प्रचण्ड र ओलीमा पनि छ ।’
नेता भण्डारीले अहिले मुलुकको भूगोलको सुरक्षा गर्न सकेका छौं कि छैनौं ? यो महत्वपूर्ण कुरा भएको पनि सुनाए । उनले भने,‘यसमा पनि हामी चुकेका छौं । आज हाम्रो देश आर्थिक रुपले पछि परेको छ, नेपाली जनताहरुको अहिलेपनि अस्पताल र विद्यालयमा पनि पहुँच छैन् । सरकारी विद्यालयहरु प्रतिष्पर्धी छैनन् । जनताहरु दिन दिनै गरिब बनेका छन, नेताहरुमा देश बनाऔं भन्ने चिन्तन भएन । प्राकृतिक साधन स्रोतले हामी धनी छौं । हाम्रो कमजोरी नै देशलाई हेर्ने राष्ट्रिय एप्रोच नै भएन ।’
उनले नेपालमा कानूनले काम गर्न नसकेको पनि टिप्पणी गरे । उनले भने,‘कानूनले व्यक्तिको मुख हेर्दा धेरै गलत गर्नेहरु राजनीतिमा प्रवेश गरे । यो नै ठूलो रोग हो । राजनीतिमा पनि नयाँ पुस्ताले प्रवेश गर्न सकेका छैनन् । हामीले राष्ट्रलाई हेरेर योजना बनाउन सकेनौं । शेरबहादुर देउवाजीको सय दिनको उपलब्धिको कुरा गर्दा तीन महिनासम्म मन्त्रिमण्डललाई हामीले पूर्णता दिन सकेनौं । सय दिनमा तीन सय जना काम नगर्ने ठेकेदारहरु थुनिनुपर्दथ्यो । क्यान्सर, मिर्गोला र स्पाईनल कडको बिरामीलाई पाँच हजार दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो त राम्रो कुरा हो । वर्तमान चुनौतीअनुसार नेपालको राजनीतिक नेतृत्व अघि बढ्न सकेन । नेपालको पोलिटिक्सको डिएनएमा नै खराब छ ।’
उनले हिजो देउवा र गिरिजाबाबुबीच द्धन्द्ध हुँदा देउवाले पार्टी फुटाएको पनि स्मरण गराए । अहिले सदन किन चलेन ? भन्दै उनले प्रश्न पनि गरे ।
भण्डारीले नेपालका कम्युनिष्टहरुमा विद्रोही नेचर भएको सुनाए । उनले भने, ‘उहाँहरु सत्तामा जाँदा पनि विद्रोही, बाहिर बस्दापनि विद्रोही, सदनमा पनि विद्रोही । सर्वदलीय बैठकमा एमाले आएन । हिजो देउवाजी त सर्वदलीय बैठकमा जानुभएको थियो त । सदन नचल्नु भनेको दुःखद् कुरा हो । यदि पार्लियामेन्ट चल्न दिईएन भने नेपालको डेमोक्रेसी गुम्नपनि सक्छ । सबै दलका नेता खासगरी दलका नेता बन्न सकेका छैनन् । यी नेताहरुले देश बनाउन सक्दैनन् । यी नेताहरु विदा नहुञ्जेलसम्म देश बन्दैन् । उहाँहरुबाट मुलुक बन्दैन । बरु परिवार बन्ला । कांग्रेसको यो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ ।’